Dhibaatada Webka 3.0 ayaa sii socota | Martech Zone
Kala soocista, shaandhaynta, calaamadeynta, ururinta, weydiinta, tusmeynta, qaabeynta, qaabeynta, muujinta, isku xirka, soo socda, isu geynta, jeclaanta, tifaftirka, raadinta, wadaagida, calaamadeynta, qodista, turunturooyinka, kala soocida, isku dhafka, raadinta, u sifeynta… waa xanuun aad u xanuun badan.
Web 0: 1989 Tim Berners-Lee oo ka tirsan CERN wuxuu soo jeedinayaa Internet furan. Websaydhkii ugu horreeyay wuxuu soo ifbaxay 1991 iyadoo la adeegsanayo Mashruuca World Wide Web.
Web 1.0: Marka la gaaro 1999 waxaa jira 3 milyan oo degello adeegsadayaashuna ugu horrayn erey-af iyo tusaallo sida Yahoo!
Web 2.0: Markii la gaaro 2006 waxaa jira 85 milyan oo goobood laakiin bogag is dhexgal ah, wikis iyo baraha bulshada ayaa bilaabaya inay qaabeeyaan meesha dadka isticmaala ay uga qeyb qaadan karaan horumarinta waxyaabaha.
Web 3.0: Marka la gaaro 2014, in ka badan hal bilyan oo degel ayaa ka jira nidaamyo raadin iyo isgaarsiin caqli gal ah, badanaa sababta oo ah waxay si wax ku ool ah u qaabeysay oo loogu calaamadeeyay teknoolojiyadda macaamiisha, tusmada, iyo helitaanka macluumaadka isticmaalayaasha.
Web 4.0: Waxaan geleynaa wejiga xiga ee Internet-ka halkaasoo wax waliba ku xiran yihiin, nidaamyadu waa is-barasho, baahiyaha ayaa la gaaryeelay oo la hagaajiyay, shabakaduna waxay ku xirxirtay nolosheena sida awood qeybintii u sameysay qarni ka hor.
Waxaan saadaaliyay in sanadka 2010 uu noqon doono sanadka shaandhaynta, shaqsiyeynta, iyo hagaajinta. Maanta, ma hubo inaan xitaa dhownahay weli - waxaa laga yaabaa inaan weli sannado ka maqanahay. Qeybta hoose waa inaan u baahanahay hadda, in kastoo. Qaylada ayaa durba dhago la '.
Xayeysiinta barnaamijyada, sirdoonka macmalka ah, iyo barashada mashiinka dhammaantood waxaa la galiyaa daruuraha si ay isugu dayaan inay hagaajiyaan ku-xirnaanshaha iyo beegsiga isgaarsiinta. Arrintu waxay tahay in kuwani ay yihiin dhammaan teknoolojiyadda ay u direen shirkadaha si ay u xakameeyaan isgaarsiinta adeegsadaha ugu dambeeya. Tani gabi ahaanba gadaal ayey u dhacday… waxaan u baahanahay nidaamyo halkaasoo isticmaaluhu si fudud ugu xakamayn karo macluumaadka la quudiyey iyo sida loo quudinayo.
Google waa 20 jir welina waa uun Mashiinka raadinta, kaliya ku siinaya xog carrab la 'oo lagu muujiyey ereyada muhiimka ah ee u dhigma weydiimahaaga. Waxaan runtii jeclaan lahaa qof inuu dhiso a hel matoor marka xigta… Waan ku daalay raadinta, saw maaha? Waxaan rajeynayaa, ka korsashada ballaaran ee teknoolojiyada codka waxay u horseedi doontaa hal-abuurnimo fagaarahan - Ma qiyaasi karo in macaamiisha ay dulqaad yeelan doonaan iyagoo ku wareegaya natiijooyin badan si ay u helaan midka ay raadinayaan.
Shirkadaha sida Firefox, Google, iyo Apple ayaa laga yaabaa inay ku caawiyaan. Waxaa qoray keydin raadinta xayeysiinta marka la rakibo, waxay mas'uuliyadda saaraysaa gacmaha isticmaalaha. Suuqge ahaan, waxay ila noqon kartaa xoogaa miro ah aniga oo raba macaamiisha iyo ganacsatadu inay joojiyaan dhageysiga aniga. Laakiin haddii aanan khusayn oo aan dhibsado, taasi gabi ahaanba waa waxa ay tahay inay sameeyaan. Suuqgeyaashu wali had iyo jeer way iska diidaan inay fariinta u diraan qof walba ka dibna qaybinta iyo turxaan bixinta fariinta.
GDPR sidoo kale way caawin kartaa. Wax fikrad ah kama haysto waxa ay ahayd saamaynta bilowga GDPR fariimaha ka-doorbid shirkadaha, laakiin waxaan dareemayaa inay waxyeello ii geysteen. In kasta oo aan aaminsanahay inay ahayd gacan culus, haddana waxay gabi ahaanba naga dhigeysaa kuwo si fiican uga ganacsada. Haddii aan run ahaantii ka walaacsanahay fariin kasta oo aan dirayno, markaan dirayno, iyo qiimaha ay u keentay rajo kasta ama macaamil kasta - waan hubaa inaan u diri lahayn qayb ka mid ah. Iyo haddii macaamiisha aan la duqeyn, waxaa laga yaabaa inaysan ku riixin xeerar gacan adag sida tan.
Waxaan u maleynayaa in shirkadaha tikniyoolajiyada ee dhagaysta oo ula dhaqma rajada iyo macaamiisha ixtiraamka ay mudan yihiin, hubinta qiimaha loo maro isgaarsiinta, aakhirka noqon doonaan guuleystayaasha Web 3.0. Haddii kale, waxaan ku dhex quusaynaa Webka 4.0 (Internetka Waxyaabaha) oo aan lahayn shabakad badbaado leh.
Tags: isu geynDiiwaan-gelintaKala saaridururinayaqodidshaandhayntasocdaqaabayntamuujintamuujintajecelIsgaadhsiintaQuusinraadintashabakada macnahala wadaagokala soocidaqaabeyntaturunturoodotagistaTweetsWebsaytka 3Websaytka 3.0
Waxaan isku dayay inaan kuu dhiso mashiin raadiya. Halkii aad ku tiirsan lahayd kombiyuutarada si ay u shaandheeyaan xogta aan habeysneyn ee adiga kugu habboon, mishiinka raadintu wuxuu ku tiirsan yahay shabakaddaada bulshada.
Xad-dhaafka ereyga ayaa abuuray bahal kakooban Frankenstein. Hadda kuma filna ganacsiyada yar inay yeeshaan degel websaydh, waa inay lahaadaan qaab-dhismeed khabiir SEO ah oo ka kooban waxyaabaha ay ka kooban yihiin iyo metadata si ay uga farxiyaan algorithms-ka Google. Tani waa waalli.
Waxaan rajeyneynaa in tiknoolajiyada waqtiga-saxda ah oo ay kujirto tayda kaa caawin doonta inaad * hesho * waxaad rabto, markaad rabto waana ka badbaadi karnaa cadaabta keyword.
Jawaab hadaad rabto inaad waxbadan ogaato. Ma doonayo inaan kugu buuxiyo magaca shirkadayda ama degelkeyga. Waxay ku saabsan tahay "opt-in".
Waan rumaysan kari waayey inaadan xitaa xigasho i siin 😉
Ma maqashay Wolfram Alpha? (http://www.wolframalpha.com/) Taasi waa "hel mashiin."
Nabade Cassie! Waxaan u maleynayaa Wolfram xaqiiqdii inay tahay talaabo dhanka saxda ah loo qaaday!
Gebi ahaanba waan diidanahay. Haa, xogtu waa xad dhaaf haddii aad u isticmaasho farsamooyinka tirakoobka dhaqameed ee dhibaatooyinka semantic. Google wuxuu sameeyaa tan - taasoo keentay natiijo dabada-dheer oo natiijooyin iyo adeegsadeyaal jahwareersan.
Qeybaha soo ifbaxaya ee ku-meel-gaadhka ah ee la-qabsiga ayaa aad ugu habboon ku habboonaanta semantics-ka marka loo eego waxa looga hadlay fiidiyowga.
Inbadan oo lasoco… Waxaan ka shaqeyneynaa hada.
Waad ku mahadsan tahay dhajinta.